Wednesday March 07, 2018 - 10:36:29 in Wararka by Super Admin
Taliska ciidamada shisheeyaha AMISOM ayaa xaqiijiyay in tobaneeyo askari looga dilay weerar dhabbagal ah oo isbuucii lasoo dhaafay ka dhacay gobolka shabeelaha dhexe.
Sawir hore gaari laga gubay ciidamada Kenya
Afhayeenka ciidamada Shisheeye ee AMISOM ninka lagu magacaaboLieutenant Colonel Wilson Rono oo la hadlay Idaacadda ku hadasha afka Maraykanka ayaa walaac ka muujiyay in ciidamada Mujaahidiinta ay soo qaadana weeraro waaweyn oo lamid ah kii dhawaan ciidamada Burundi ku qabsaday duleedka degmada Balcad, kaas oo lagu dilay 23 askari oo kamid ah ciidamadaas, loogana qabsaday 17 gaari oo noocyada dagaalka ah.
Rono wuxuu dhanka kale shaaciyay tirada ciidamada Burundi looga dilay kamiinkii Jimcihii lasoo dhaafay ka dhacay duleedka Balcad,isagoona aad uga been sheegay, waxaana xitaa uu khilaafay tirada dowladda Burundi ay qirtay in looga dilay dagaalkaas.
Afhayeenka AMISOM Col. Wilson Rono ayaa xaqiijiyay in ugu yaraan 10 askari looga dilay weerarkii dhabbagal ahaa isagoo muujiyay walaac ku aaddan in alshabaab sare uqaaddo weerarada ay cagta ku marinayso kolonyada AMISOM marka ay sahayda isku gudbinayaan.
Xarakada Al Shabaab ayaa waxba kama jiraan ka dhigtay duullaan caalami ah oo dowlado shisheeye kusoo qaadeen dalka Soomaaliya, tan iyo sanadidi 2011 markii Shabaabku isaga baxeen magaalada caasimadda ah ayay galeen dagaal jabhadeyn ah kaasi oo sababay in dhiig bax joogta ah uu usoo galo ciidamada AMISOM iyo kuwa Itoobiya.